PulseAudio 14.0 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo | Linux Vakapindwa muropa
Kutanga kwe iyo nyowani vhezheni yeruzha server "PulseAudio 14.0" iyo inoshanda semurevereri pakati pezvishandiso uye akasiyana-siyana epasi-epasi ruzha masisitimu, achibvisa basa nechikwata.
PulseAudio inokutendera iwe kudzora vhoriyamu uye musanganiswa wezwi padanho rezvimwe zvinoshandiswa, kuronga ruzha rwekuisa, sanganisa uye kuburitsa muhupo hwakawanda hwekuisa uye kubuda nzira kana makadhi ezwi, zvinokutendera iwe kuti uchinje odhiyo yekushambadzira fomati pane iyo nhunzi uye shandisa plugins, zvinoita kuti zvive pachena kujekesa odhiyo odhiyo kune mumwe muchina.
Main nyowani maficha ePulseAudio 14.0
Mune iyi vhezheni itsva rwizi redirection rakaitwa kana uchichinja odhiyo sosi default kana odhiyo yekuburitsa mudziyo. Pakutanga, kana odhiyo ikaburitsa chishandiso, hova nyowani dzakaendeswa kune yakasarudzwa kuburitsa chishandiso, asi hova dzaivepo dzakaramba dzichiyerera kuenda kune yekare chishandiso. Zvino Pfungwa dzekugadzirisa hova dzekare dzakachinjwa uye ivo vanozoshandira kuchinhu chitsva.
Iko shanduko haina kukanganisa manyore akafamba nemaoko, ndiko kuti, nzira dzichachengetedzwa maererano nehova. Nekudaro, kufambisa rukova kuenda kune yakasarudzika kuburitsa chishandiso kuchabvisa iro rekushandisa link yenyika.
Zvakare, cKana chishandiso chashandurwa yezwi mune "GNOME Inzwi Zvirongwa", ino gadziriso inofambisa ese aripo hova kune chishandiso chakasarudzwa uyezve chinoshandura dhatabhesi nemigwagwa kutumira ruzha rwekushandisa kuchinhu ichi chinozotangwa munguva inotevera.
ZvePulseAudio, GNOME kurira kwegadziriro kurira kunoratidzika senge hova inofamba inofamba, iyo inogadzira matambudziko kana ichichinja default mudziyo, semaoko aifambisa hova haateedzere iyo default kuburitsa mudziyo shanduko.
Imwe shanduko yakakosha ndeyekuti zvinomira pachena, ndiyo kunatsiridzwa rutsigiro rweUCM (Shandisa Case Manager) inoshandiswa mumidziyo mitsva ine Intel SOF firmware (Ruzha Vhura Firmware). Tsigiro yakawedzerwa kushandisa Hardware vhoriyamu modese (semuenzaniso, nzira yakanyarara) kuburikidza neALSA. Zvakare, akawanda makadhi enzwi ane zita rimwe chete anogona kushandiswa neUCM.
Zvezviteshi, kugona kudoma mhando uye kuwanikwa boka kunoitwa, ichikubvumidza iwe kuti uone kuti ndeapi mapareti anosanganiswa nechero chairo chigadzirwa (masipika, mahedhifoni, maikorofoni, nezvimwewo).
X11-based module (module-x11-bhero, module-x11-cork-chikumbiro, module-x11-shambadza, uye module-x11-xsmp) ita nharo yekusavimbika kupfuudza kukosha kwenzvimbo inodikanwa yeXAUTHORITY nharaunda inoenderana nekubatana ne X11 server.
Iyo nyowani RTP backend yakavakirwa paGStreamer yakaitwa (module module-rtp-send uye module-rtp-recv iko zvino inogona kushandisa GStreamer kuita RTP protocol).
Nekutadza, otomatiki switching kubva odhiyo kuburitsa kuenda kuHDMI yakaremara sezvo zvakatungamira mukukanganisa maitiro nekuda kwekuumbwa kwechinhu chitsva chinowedzera chiitiko muALSA apo tarisiro yakamutswa kubva kuhope mode.
Yakawedzerwa USB Gaming Headset Tsigiro: HyperX Cloud Orbit S, LucidSound LS31, Razer Kraken Tournament Edition, SteelSeries Arctis 5 (2019 Edition), uye SteelSeries Arctis Pro (2019 Edition). Yakaparadzaniswa stereo uye mono zvinobuda izvo zvino zvakagadzirirwa aya mamodheru.
Nekutadza, flat mode yakadzimwa, iyo inoisa huwandu hwehuwandu hwehuwandu hwehuwandu zvichienderana nematanho erwizi rukuru kwazvo.
Kana uchiburitsa odhiyo kuburikidza neRAOP (module-raop-sink) uchishandisa iyo "autoreconnect = yechokwadi" sarudzo, izvozvi zvave kukwanisa kumisikidza otomatiki kubatanidzazve mune chiitiko chekutadza kwekutadza.
Chiratidziro chakaparadzana chehuwandu hweanopinda uye anobuda makwara (sink_channel uye source_channel) inobvumidzwa mune module-jackdbus-detect module.
Iyo module-yekununura-hova yakadzikiswa uye mashandiro ayo akaendeswa kune chikuru chimiro.
Wakawedzera rutsigiro rwe ALSA rinobatanidza kutonga pamwe isiri zero zero index uye kugona kuseta tarisiro mabasa (kifaa.yakatarisirwa-mabasa) emidziyo mune ALSA maficha mamiriro.
Wakawedzera kugona kumisikidza mafomati ekumanikidza pane module-null-sink pasina kurodha pasi module uchishandisa "pactl set-sink-formats" command.
Chekupedzisira, iyo nyowani vhezheni ichave ichisvika kune zvinyorwa zvekusiyana kwakasiyana kweLinux mune imwe nyaya yemazuva. Kunyangwe kune avo vanosarudza kutove neiyo nyowani vhezheni, ivo vanogona kurodha pasi sosi kodhi uye voita muunganidzwa pane yavo system
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » PulseAudio 14.0 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Uku ndiko kutora kwangu paKdenlive uye Openshot, maviri evhidhiyo edhita